May 2019 ~ Htet Aung Kyaw
8:29 AM Htet Aung Kyaw No comments
အဲဒီကအပြန်မှာတော့ ဗုဒ္ဒဂါယာကိုဝင်ပါတယ်။ လမ်းအတော်ဆိုးပါတယ်။ အားလုံး လူဖန်တီးထားတ်ာချည်း ဆိုတော့ ဘုရားဖူးဧည့်သည်အတွက် အိုကေ ပေမဲ့ သဘာဝအလှတရားကို ရှာဖွေသူတဦးအဖို့တော့ သိပ်အ မကိုက်လှပါဘူး။ ထူးခြားတာဆိုလို့ မျောက် ၃ ကောင်ပုံပဲရှိပါတယ်။ ဗုဒဟောတဲ့ ဇတ်လမ်းထဲပါတာလား ကုိုယ်ကအသချောမသိတော့ မပြောတတ်။ ကိုယ်သိတာက နိင်ငံရေး။ မျက်စိပိတ်။ နားပိတ်။ ပါးစပ်ပိတ်ထားတဲ့ မျောက် ၃ ကောင်ပုံကို မီဒီယာသမားတွေ မကြာခနသုံးလေ့ရှိတယ် မဟုတ်ပါလား။
အဲဒီကအထွက်မှာ နောက်ထပ် ဂူသေးသေးလေးတခု။ ကော့ကသောင်လို့ထင်ပါတယ်။ အဲဒီကနေ ပြန်အထွက်မှာတော့ လူသိများတဲ့ (ငယ်ငယ်တုန်းက ပုံပြင်ထဲ မကြာခနကြားခဲ့ဖူးတဲ့) ဆာ့ဒန်ဂူဆီ ခရီးဆက်ပါတယ်။ ဘာသာရေးစိတ်ဝင်စားပြီး ဘုရားဖူးချင်သူတွေအတွက် အိုကေ ပေမဲ့ သဘာဝရဲ့ လျှိ့ဝှက်ချက်တွေကို လေ့လာချင်သူတွေအတွက်တော့ ဖိနပ်ချွတ်ရတာကစပြီး အဆင်မပြေတော့ပါ။
(ဖိနပ်ချွတ်ဆို ဒီဂူတွေအားလုံးဟာ သာနာ့မယ်မြေဖြစ်ပြီး ဘုန်းတော်ကြီးတွေက ပိုင်တယ်လိ့ နားလည်ရပါတယ်)။ ဆာ့ဒန်ဂူက ဣစာသရလှိုဏ်ဂူ ထက် ပိုကြီးပေမဲ့ သဘာဝအတိုင်း ဘာမှမကျန်တော့ပါ။ လူတွေသွားလာလိ့ အဆင်ပြေအောင် လျောက်လမ်းကို ကွန်ကရစ်ခင်းပေးထားပါတယ်။ လျှိထဲဆင်းရမှာစိုးလိ့ တံတားထိုးပေးထားပါတယ်။ မှောင်နေမှာ စိုးလိ့ အဲဒီတံတားပေါ် ရောင်စုံမီးတွေ ထွန်းပေးထားပါတယ်။
selfie ဆွဲချင်သတွေအတွက် အိုကေ ပြနေပေမဲ့ စာရေးသူအတွက်တော့ ဟိုဖက်ထိပ် မြန်မြန်ရောက်ဖိ့သာ စိတ်စောနေမိပါတယ်။ တနေရာမှာတော့ ဆာဒန်ဆင်မင်းကို သောနတရာ မုတ်ဆိုးက ချောင်းပစ်ဖို့ပြင်ဆင်တဲ့ ကျောက်ဆောင်ကို လွန်ဖောက်တဲ့နေရာဆုပြီးတွေ့ပါတယ်။ ထူးထူးခြားခြား အဲဒီ လွန်ဖောက်တဲ့ ၂ နေရာပဲ အပေါ်ကိုပေါက်နေပြီး အပြင်က သစ်ပင်တွေကိုမြင်ရ၊ အပြင်လေကိုရှုခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။
ခုနက ရောင်စုံမီးတွေနဲ့တံတားထုိုးထားတဲ့နေရာဟာ ဆင်မင်းမိသားစု ရေချိးတဲ့အိုင်၊ ဒီဖက်မှာက ဆင်မင်း သမီးတော်နေတဲ့အဆောင်၊ သမီးတော် ခြင်ထောင် စသဖြင့်... သတင်းသမားတဦးအဖို့ ကျိးကြောင်းဆက် စပ်လက်ခံဖို့အတော်ခက်ပေမဲ့ ယုတိဗေဒဆိုတာ နေရာတိုင်းတော့ ဘယ်အသုံးကျလေမလဲ။
ဒီဂူကနေ အထွက် လှေစီးခွင့်ရတဲ့နေရာကတော့ စပယ်ရှယ်ပါပဲ။ လှေစိးခက တစီးအတွက် ၃၅၀၀ ကျပ်ပေး ရပါတယ်။ ဒီရေအိုင်ကလည်း ဆာဒန်ဆင်းမင်းတိ့ ရေစိမ်တဲ့နေရာလို့ဆိုပါတယ်။ ကျောက်ဆောင်အောက်မှာ လှေစီးရတဲ့အရသာက ထူးကဲလှပါတယ်။ (ရသေ့ပျံ ဂူက လှေမစီးရခင်အထိ)
အဲဒီကအထွက်မှာတော့ ကျောက်ကလပ် ဘုရားဆီဝင်ပါတယ်။ ပအို့လူငယ်တွေကြို့ကိုဆိုတဲ့ အလံတွေ တင်ထားတာမို့ လူငယ်အစည်းဝေးရှိပုံရပါတယ်။ ရေကန်အလယ်က စေတီဟာ ဓာတ်ပုံရိုက်ဖိ့ သိပ်ကောင်းပေမဲ့ နေက ပူလွန်းတော့ ပုံကောင်းတပုံရဖိ့တော့ မဖြစ်နိင်ခဲ့ပါ။
အဲဒီကအထွက်မှာတော့ နေ့လည် ၁ နာရီလောက်ရှိနေပြိဖြစ်တဲ့အတွက် ဇွဲကပင်တောင်ခြေနားက ဆုိုင်တခုမှာ နေ့လည်စာစားပါတယ်။ ထုံးစံအတိုင်း ထိုင်းပြန်တွေချက်တဲ့ ထိုင်းအစာတွေပါပဲ။ ကရင်ဆိုင်မှာ ထိုင်းအစာ စားပြီးတဲ့နောက် ကရင်မြို့တော်ရဲ့ အထင်ကရ ဇွဲကပင်တောင်ဆီသွားပါတယ်။ ခြေအ၀င်ဝ မုဒ်ဦးမှာရေးထားတာက မဘသ နယ်မြေတဲ့။ ကိုယ်က သတင်းလိုက်ဖို့လာတာမဟုတ်ဘူး။ အလည်သက်သက်ဆုိုတော့ မေးမြန်းမနေတော့ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကျနော် မိတ် ဆွေကတော့ပြောပါတယ်။ တနိင်ငံလုံးက မဘသ ဆိုင်းဘုတ်တွေဖြတ်ချလိုက်ပေမဲ့ ဘားအံမှာတော့ ဒါကို ထိလိုမရဘူးဆိုပါတယ်။
ကိုယ်ကသာ ယုတ္တိဗေဒတွေ လျောက်ပြောနေတာ။ ကားသမားက တောင်ခြေရောက်တာနဲ့ ရုပ်တုတခုဆီ ဦးတည်ပြီး ကားကိုမောင်းကာ ရှေ့တိုး-နောက်ဆုတ်လုပ်နေလေရဲ့။ ပထမ တုန်းက ကားပါကင် ထိုးဖို့ နေရာ မကျလို ရှေ့တိုး-နောက်ဆုတ်လုပ်နေတယ်လို့ပဲထင်တာ။ ၃ ခါလောက်လုပ်ပြီး လက်အုပ်ပါ ချီတော့မှ ရုပ်တုကို ဦး ၃ ကြိမ်ချရှိခိုးနေမှန်း ရိပ်မိပါတယ်။ သူ့အရပ်နဲ့ သူ့ဇတ်ပေါ့။ အိမ်နီးချင်း ထိုင်းက ကားသမားတွေလဲ ဒီလုိုလုပ်ကြတာကို သွားသတိရမိပါတယ်။
အဲဒါကိုကြည့်ရင်းနဲ့ ကားအောက်ဆင်းချင်စိတ်မရှိတော့တာနဲ့ တောင်ခြေက စေတီဆီမသွားဖြစ်ပဲ ပြန်လှည့် လာခဲ့ပါတယ်။ တောင်ထိပ်ကိုတော့ တက်ချင်သား။ ဒါပေမဲ့ အတက် ၄ နာရီ၊ အဆင်း ၃ နာရီကြာမှာဆိုတော့ အခုက နေ့လည် ၂ နာရီကျော်နေပြီ။ ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိင်။ လူပြောများနေတဲ့ တောင်ထိပ်က မှန်သားရင်ပြင် ကိုတော့ တောင်ခြေကနေ ခပ်ဝါးဝါး လှမ်းမြင်နေရပါတယ်။ ဒီလိုနဲပ တောင်ခြေကနေ ပြန်လှည့်ခဲ့ပေါ့။
နေ့လည်ဖက်သွားတဲ့အထဲမှာ ရသေ့ပျံဂုနဲ့ အဲဒီဂူဘေးက ဂူအောက်မှ လေစီးရတဲ့အရသာကို အကြိက်ဆုံးပါပဲ။ ဂူကတော့ ခုနက ဆာဂန်ဂူနဲ့ သိပ်မကွာလှပါဘူး။ အားလုံး လူဖန်တီး ပြင်ဆင်ထားတာက များနေပါပြီ။
ဒါပေမဲ့ အဲဒီဂူဘေးနားရှိ တူးမြောင်းလေးထဲကနေ လက်လှော်လှေလေးကိုစီးပြီး (တစီးမှာ ၄ ဦးပဲစီးခွင့်ရှိ) မှောမှောင်မဲမဲ ဂူထဲဝင်ရတဲ့အရသာက သိပ်စိပ်လှုပ်ရှားဖို့ကောင်းပါတယ်။ လှေက ၆ စီးပဲရှိတော့ အဲဒီနေရာမှာ တန်းစီစောင့်ရတာတင် တနာရီ အချိန်ကုန်ပါတယ်။ ဒီရောက်ပြီးမှ ဒါမစီးဖူးဘူးဆိုရင်လဲ မဖြစ်တော့ ဇွဲကောင်းကောင်းနဲ့ ဆက်စောင့်။
လှေစီးခက ၅၀၀၀ ကျပ်ပေးရပါတယ်။ ကိုယ်ဆီမှာက ကလေး ၂ ယောက်ပဲပါတယ်ဆိုတော့ လြူ့ကုံတဦးပါ တင်သွားလိုက်ပါသေးတယ်။ ၁၀ မီနစ်လောက်တူးမြောင်းလေးအတိုင်းလှော်ပြီးတော့ ဂူဝဆီရောက်လာပါတယ်။ ခုနက ဆာဒန်ဂူက ရေကန်လို ဟိုဖက် ဒီဖက်မြင်မနေရဘူး။ တကယ့်ကိုမှောင်မှောင်မဲမဲ။ လှေပေါ်မှာ လက်နှိပ်ဓာတ်မိးအကြီးကြီး တွေပါလာလိ့ေ တ်ာသေးတယ်။ မီးလဲထွန်းချင်၊ ဓာတ်ပုံလဲရိုက်ချင်၊ လှေလှုပ်မှာလဲ စိုးရိမ်။ မောင်မောင်မဲမဲ ထဲ လှေမှောက်လို့ကတော့ အသက်ရှင်ဖို့ သိပ်မလွယ်လောက်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဘုရားမတယ်ပြောရမလား။ ဒီထဲမှာ လှေတခါမှ မဖောက်ဖူးသေးဘူလိ့ လှေသမားကပြောပါတယ်။
တလောကတောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဒီဂူကိုလာလည်သွားသေးတယ်လိ့ လှေသမားတွေကပြောပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူကတော့ ကျနော်တိ့စီးတဲ့ ၄ ယောက်စီး လက်လှော်လှေကိုစီးတာမဟုတ်ပဲ မီးသန့်က အထူး လှေကိုစီးပြီး ဟိုဖက်ထိပ်ကနေ ပြန်ထွက်သွားတာလိ့ လှေသမားက သံစကာတွေ ကာထားတဲ့ အဲဒီအပေါက် ကို လက်ညှိုးထိုးပြီး ပြောပြနေပါတယ်။ ကိုယ်ကတော့ ကြောက်ကြောက်နဲ့ တပတ်လှည်ပြီး လာလမ်းအတိုင်း ပြန်သွားရဦးမယ်။
ဘာပြောပြော ပထမ ပိုင်းမှာ စိုးရိမ်စိတ်နဲနဲရှိပေမဲ့ တကယ်စိတ်လှုပ်ရှားဖို့ကောင်းတဲ့ ဂုတွင်း လှေစီးခြင်း အနပညာတရပ်ပါပဲ။ ရေတိုက်စားလိ့ ပြိူထားပုံရတဲ့ ကျောက်နံရံတွေ၊ ကျောက် (အမိုးလိုပပြောရမလား)- ခေါင်းပေါ်က ကျောက်သားတွေက ပန်းပုထွင်းထားတာထက်တောင် လက်ရာမြောက်နေပါတယ်။ ဘယ်မှ ကြိုတင် စိတ်ကူးမထားတဲ့ မြင်ကွင်းတွေကို လှလှပပ ကြီးကို မြင်ခဲ့ရပါတယ်။
အဲဒီဂူကနေပြန်ထွက်တော့ ၄ နာရီကျော်နေပြီ။ လူလည်းအတော်အီနေပြီဆိုတော့ ဟိုတယ်ပြန်ရင် ကောင်း မယ်ပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ကားဆရာက အဆွယ်ကောင်းတယ်။ ဒီရောက်ပြီးမှတော့ ရှိသမျှဂူ စုံအောင်သွားလိုက်ပေါ့။ ကားခလည်းထပ်ပေးစရာမလိုဘူးတဲ့။ ဒီလိုနဲ့ ဘားအံမြိအခြားတဖက်က ဂူတခုနဲ့ လင်းနိ့ဂူဆီ ခရီးဆက်ခဲ့ပါတယ်။
တဖက်ကမ်းဆိုတာက သံလွင်မြစ်ကိုတခါဖြတ်ပြီး ပြန်ထွက်လာရလို့ပါ။ ဒီနေရာမှာ သတိထားမိတာတခုက ဘားအံဖက်ကနေ အပြင်ဖက်အထွက်မှာ စံပြတရုတ်လှရွာ ဆိုတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်ကိုတွေ့မိပါတယ်။ ဒါဟာ ရာဇ၀င်ထဲက အမည်တခုပေါ့။ အတိအကျပြောရရင် ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်ဝန်းကျင်တုန်းက (ခုနှစ် အတိအကျ ပြန်ရှာ တင်ပေးပါမည်) နအဖ အတွင်းရေးမှုး ၁ ဗိုလ်ချပ်တင်ဦးနဲ့အဖွဲ့ ရဟတ်ယဉ်ပျက်ကျသေဆုံးတဲ့နေရာ။
ဘာကြောင့် ဒီလောက်အထိမှတ်မိနေသလဲဆိုရင် အဲဒီတုန်းက ရရှိတဲ့ ကြားဖြတ်စက်သတင်းကို သတင်းအစြဖ် ပြန်ေ၇းပြီး DVB ကနေ လွှင့်ခဲ့ဖူးလို့ပါ။ ဘယ်လောက်အထိ ထဲထဲဝင်ဝင်ရေးလိုက်မိသလဲဆိုရင် ဗိုလ်ချပ် အချင်းချင်းစကားများရာကနေ ဘယ်သု့ ပီအေ က လက်ပစ်ဗံုးုးကို ဘယ်လက်နဲ့ကုိုင်ပြီး ပစ်ဖို့လုပ်နေစဉ် ပြုတ်ကျသွားတယ်... စသဖြင့် စက်သတင်းပေါ်အခြေခံပြီး အသေးစိပ်ရေးလိုမလို့... မင်းတို့ DVB သတင်းထောက်ပါ ရဟတ်ယဉ်ပေါ် ပါသွားသလားဆိုပြီး အမေးခံခဲ့ရဖူးလိ့ မီဒီယာ ကျင့်ဝတ်အရ အသေအချာကို မှတ်မိနေတာပါ။
အခု ရုတ်တရက် အဲဒီရွာကိုတွေ့လိုက်တော့ စိတ်ထဲမှာ တမျိးကြီး။ သွားတော့ ကြည့်ချင်သား။ ဒါပေမဲ့ အချိန်က မရတော့ဘူး။ သွားကြည့်ပြီး ဟိုမေးဒီမေးလုပ်မှ ဆွဲစေ့ခံနေရရင် ဒုက္ခ။ ခေတ်က သိပ်ကောင်းသေးတာ ဟုတ်ဘူး။ ဘုရားဖူး သက်သက်ပဲကောင်းပါတယ်လေ ဆိုပြီး - ဆက်မောင်း ကားဆရာလို့ ပြောရပါတယ်။
မြစ်တဖက်ကမ်းက နောက်ထပ်ဂူတလုံးကလည်း သိပ်အထူးကြီးတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘုရားတွေပဲရှိပြီး ဂူက လှိုင်သဘောမျှသာ။ ဟိုဖက် ဒီဖက်မပေါက်ပါ။ အဲ.ဒီကအထွက် နောက်ဆုံးသွားခဲ့တဲ့ လင်းနိ့ဂူကတော့ တန် တယ်လိုပပြောရမယ်။ ဒါပေမဲ့ သွားတာနဲနဲစောသွားလို့ မီနစ် ၉၀ လောက် ထိုင်စောင့်လိုက်ရပါတယ်။ စောဆို ကားဆရာပြောတာက ၅ ခွဲလောက်ဆို လင်းနိ့တွေထွက်တယ်လို့ သူသိထားတယ်ဆိုပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ တကယ်တန်းရောက်တဲ့အခါမှာတော့ လင်းနိ့တွေက အချိ်န်ပြောင်းသွားပြီ။ ထွက်ချိန်စောရင် သိန်းငှက် အပါဝင် တခြားငှက်ကြီးတွေက သူတိ့ကိ ဖမ်းစားတဲ့အတွက် ညအမှောင်ချိန် ၆ ခွဲလောက်မှ ထွက်တော့ တယ်လို့ ဂူဘေးနားရှိ ဆရာတော်တပါးက ရှင်းပြပါတယ်။ (လင်းနိုဂူ အပါဝင် တွေ့သမျှဂူတွေအားလုံး ဘုန်းကြီး သိ့မဟုတ် သာ့သနာပိုင်နယ်မြေတွေချည်းဖြစ်နေ)။
ဒီတော့ မတက်နိင်ဘူး။ လာပြီးမှ ဆက်စောင့်ပေါ့။ သတင်းကိုကြိမလေ့လာထားတဲ့ မြန်မာတိုးရစ်က ဒီလိုခံ လိုက်ရပေမဲ့ ဘာမဆိုအသေအချာကြိတင်လေ့လာထားတတ်ကြတဲ့ အနောက်တိုင်း တိုးရစ်တွေကတော့ ၆ နာရီဝန်းကျင်ကျမှ တဖွဲဖွဲရောက်လာကြပါတယ်။ အနောက်တိုင်းသားချည်း ၂၀ ကျော်မယ်ထင်ပါတယ်။ တချိ့က အသေချာသိနေတဲ့အလား ၆ မခွဲခင် တောင်ထိပ်တက်ပြီးတောင် ဓာတ်ပုံရုိုကနေကြသေး။ ကုိုယ်ကတေ့ လွတ်သွားမှာစိုးတာနဲ့ ထုိုင်ရာက မထပဲ ကင်မရာနဲ့ ထိုင်စောင့်ပေါ့။
မြန်မာတိုးရစ်အုပ်စုထဲက အမျိးသမီးတွေကတော့ တိုးတိုးလေးပြောနေကြပါတယ်။ နိင်ငံခြားသားတွေက ဇွဲကောင်းတယ်။ လာပြီးရင် ဆုံးတဲ့အထိစောင့်တယ်။ ငါတိ့မြန်မာတွေဆို ဒီလောက်ကြာတာ မစောင့်နိင်ဘူးဆို ပြီး ပြန်သွားကြလိမ့်မယ်တဲ့။
ဒီလိုနဲ့ဇွဲကောင်းကောင်းစောင့်လိုက်တာ ၆ နာရီ ၄၀ မီနစ်လောက်မှာ (အတော်လေး မှောစပြုနေပြီ) လင်းနိ့ဂူ ၀မှာ အသံကြားရပါတယ်။ မှောင်နေတော့ သဲသဲကွဲကွဲမမြင်ရဘူး။ ကင်မရာကို သံလွင်မြစ်ဖက်လှည့်လိုက် တော့မှ နောက်ခံကောင်းကင်အရောင်အောက်မှာ ထောင်နဲ့ချီတဲ့ လင်းနုို့တွေကို မြင်ရပါတယ်။ အဲဒီလို ထွက်နေတဲ့အချိန် မီနစ် ၃၀ လောက်ကြတဲ့အထိ လင်းနိ့တွေက ထွက်လို့မကုန်သေး။ ကိုယ်က မစောင့်နိင် တော့ဘူး။ ခြင်ကလဲ ကိုက်၊ မှောင်ကလဲမှောင်ဆိုတော့။ နိင်ငံခြား တိုးရစ်တွေလဲ ပြန်စပြပြီဆိုတော့ ကိုယ် လည်းလှည့်ပြန်ခဲ့ပေါ့။ (ဗွီဒီယို ကလစ်ထဲ ကြည့်ပါရန်)
အဲ ဟိုတယ်ပြန်ရောက်၊ ရေချိးပြီးအပြင်ပြန်ထွက်တော့. ၈ နာရီလောက်ရှိနေပြီ။ ဒီနေ့က ကန်သာယာဘေးက တည်းခိုခန်းမှာအခန်းရတော့ အဲဒီဘေးနားက ညဈေးက သိပ်မိုက်။ ထိုင်းအစာတွေ အစုံရပါတယ်။ ရန်ကန်မှာ မတွေ့ရ (ကျနော်မတွေ့တာလဲဖြစ်နိင်ပါတယ်) တဲ့ စိုင်ကော်အပါဝင် ထိုင်းအစာတွေက လတ်လတ် ဆတ်ဆတ်။ မဲဆောက်ညဈေးထဲ ရောက်နေသလိုလို။
ညဈေးဆုိုလို့ ရန်ကုန် ကမ်းနားလမ်းက ညဈေးလိုမဟုတ်ဘူး။ ညနေ ၄ နာရီမထိုးခင် ဒီနေရာမှာ ဘာမှမရှိ။ ၄ နာရီကျမှ ဆိုင်တွေအသီးသီးရောက်လာပြီး ည ၁၀ နာရီလောက်မှာ အပြီး ပြန်သိမ်းကြပါတယ်။ တကယ့်ကို ညဈေးပီသလှပါတယ်။ သန့်ရှင်းသန့်ရပ်မှုကလည်း ရန်ကုန်ထက် သာပါတယ်။ မော်လမြိင်ညဈေးထက်တောင် ပိုစနစ်ကျတယ်ပြောရမလား။ မော်လမြိင်သာတာကတော့ သံလွင်မြစ်ဘေးမှာဖြစ်နေပြီး ဒီဟာလေးက ကန်ဘေးမှာဖြစ်နေတာ တခုတည်းပါ။
ဒါပေမဲ့ နောက်နှစ်ဆိုရင် သံလွင်မြစ်ဘေးမှာလည်း ညဈေးတန်းဖြစ်မလာမလားမပြောတတ်ပါ။ ဘာကြောင့်လဲဆို အခုက သံလွင်မြစ်ဘေးတလျောက်လုပ်နေတဲ့ ညနေခင်းအပန်းဖြေနေရာတွေက မပြီးသေးပါဘူး။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ရန်ကုန်ကနေ ၅ နာရီမောင်းရုံနဲ့ ရောက်နိင်ပြီး သဘာဝရဲ့အလှပတွေကို ဒီလိုခံစားနိင်တဲ့ နေရာဆီ နောက်တခေါက် ထပ်သွားချင်နေမှာတော့ အမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
8:27 AM Htet Aung Kyaw No comments
ဘားအံရောက်တော့ တာလပေါ ဟင်းရတဲ့ထမင်းဆုိုင်တခုမှာ နေ့လည်စာစားရင်း လာကြိုမဲ့ ရဲဘော်ကြီးကို စောင့်ပါတယ်။ တာလပေါဟင်းက ကရင်ရုိုးရာဟင်းဆိုပြီး တောပြန်တွေ အတော်ကြိုက်ကြပါတယ်။ ကိုယ်က တော့ တောထဲမှာတုန်းက မောင်ကျော်တွေဖြစ်သလိုချက်ကျွေး (တောထဲမှာ ဆီမရှိ။ အစာပလာမရှိ) တာကို စားမိကတည်းက တာလပေါဆို သိပ်စိတ်မ၀င်စားတော့ပါ။ ဒါပေမဲ့ အခု ကရင်မြိ့တော်ရောက်တုန်းတော့ စားကြည့်ဦးမှဆိုပြီးမှာတော့ ကုန်ပြီတဲ့။
ဟိုမှာ လာကြိုတဲ့ ရဲဘော်ကြီးရောက်လာပြီ။ ဒုက္ခပါပဲ။ ဟောလီးဒေးထွက်လာပါတယ်ဆိုမှ လာကြိတဲ့ကားမှာ ခွပ်ဒေါင်းအလံတံဆိပ်ကြီးနဲ့။ ဒါကြောင့်ပြောတာပေါ့- သွားလေရာ တောင်တွင်းက ဇတ်လမ်းနဲ့ သိပ်မကင်းလှဘူးဆိုတာ။ ဟိုတယ်က ကြိုတင် ဘိုကင်လုပ်မထားတော့ ကားတစီးနဲ့ တခုဝင် တခုထွက် လိုက်မေးပေါ့။ ကန်သာယာဘေးက တည်းခိုခန်းက နေရာအတော်မိုက်ပေမဲ့ အခန်းက မရှိတော့ဘူး။ မြိ့အ၀င်နားက ထူး ထူးရှယ် ဟိုတယ်ကြီးတွေကလည်း အတော်ဈေးမြောက်မဲ့ပုံဆိုတော့ မနည်းမများ ၃ သောင်းလောက်သွားတဲ့ သံလွင်မြစ်ကမ်းနားက ဟိုတယ်တခုမှာ စခန်းချဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။
ခရီးစဉ်က အားလုံးမှ ၃ ရက်တည်း။ အခုပဲ နေ့လည် တနာရီဆိုတော့ ဘားအံမှာလည်ဖို့က မနက်ဖန် တရက်ပဲ နေ့ပြည့်ရှိမယ်။ သဖက်ခါ နေ့လည်ပြန်မှ ရန်ကုန် ညနေပြန်ရောက်။ နောက်တနေ့ မနက် အလုပ်ပြန်ဝင်ရမှာ။ ဒီအချိန် ဘယ်နေရာတွေ လည်လို့ကောင်းလဲဆိုပြီး ဟိုတယ်မှာမေးကြည့်တော့ ဂု ၂ ခုလောက်နဲ့ လင်းနိ့တွေ ထွက်တဲ့ဂူသွားကြည့်လို့မီသေးတယ်ပြောပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ တောပြန်ကိုယ့်အဖို့က ရဲဘော်ဟောင်းတွေ တွေ့ရေးက ပထမ ဦးစားပေး။ ဘားအံမှာ တောပြန် အတော်များပေမဲ့ ABSDF ဒုဥက္ကဌအဖြစ် တာဝန်ထမ်းခဲ့ဖူးတဲ့ ဦးယုနွယ် တယောက်ပဲ သွားတွေ့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ သု့အသက်က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အတူတု။ ၇၀ ကျော်နေပြီ။ စာရေးသူနဲ့မတွေ့တာကလည်း နှစ် ၃၀ လောက်ရှိနေပြီဆိုတော့ ချက်ချင်းမမှတ်မိ။ ကော့မုးရာ (၀မ်ခ)စခန်းအကြောင်း၊ သံလွင်စခန်းက အရေးပေါ် ညီလာခံတွေအကြောင်းပြောမှ ပြန်မှတ်မိ။
ဘားအံနေကလည်း အတော်ပူသား။ (ရန်ကုန်ထက်တော့ နဲနဲအေးတယ်ထင်တာပဲ) ၅ နာရီလောက်မှာတော့ ဘားအံမြိ့ကို အပေါ်ကနေလှမ်းမြင်ရတဲ့ စေတီတဆူဆီတက်ပြီး ကြည့်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ ညနေစာအတွက်က တော့ ဘားအံလဲ မြိတ်-ထားဝယ်-မော်လမြိုင်လိုပါပဲ။ ထိုင်းပြန်တွေ ချက်တဲ့ ထိုင်းအစာတွေက ထိုင်းထက်တောင်ကောင်းသေး။ ကိုယ်တွေလည်း ထိုင်းမှာပြေးရင်းလွှားရင်း ၁၀ နှစ်ဝန်းကျင်၊ ဥရောပမှာ ၁၅ နှစ်ကျော်နေခဲ့ပေမဲ့ ဥရောပစာကိုမကြိက်ပဲ ထိုင်းစာကိုသာစွဲလမ်းမိ။ မြန်မာစာထက်တောင် ထိုင်းစာကို ပိုကြိုက်နေခဲ့ မိပေါ့။
တကယ်ဆို ဘီယာခွက်လေးမပြီး သံလွင်မြစ်ဘေးက နေ၀င်ချိန်ကိုမြင်နိင်တဲ့နေရာလေးမှာထိုင်ပြီး စားသောက်ချင်တာ။ ဒါပေမဲ့ လမ်းပြရဲဘော်ကြီးက သိပ်ရုိုမစ်တစ်မဖြစ်တော့ တောထဲကစတိုင်အတိုင်းပဲ ဖြစ်သလို ဗိုက်ဖြည့်လိုက်ရပေါ့။ ဘားအံမှာ နေ၀င်ချိန် သံလွင်မြစ်ဘေးမှာထိုင်ပြီး ငေးနိင်တဲ့နေရာ နောက်တခေါက်အတွက် ထပ်ရှာရဦးမှာပေါ့။
နောက်တရက် တနင်္ဂနွေကတော့ တကယ့်ခရီးသွားနေ့ပါပဲ။ မနက် ၇ နာရီ မနက်စာစားပြီးကတည်းက ထွက်လိုက်တာ ည ၈ နာရီကျော်မှ ဟုိုတယ် ပြန်ရောက်ပါတယ်။ အယ်- ကားငှားခတွေက အမျိးမျီးရှိတယ်။ ဟိုတယ်က စီစဉ်ပေးတဲ့ သုံးဘီးကားက တနေ့ကုန်အတွက် ၃ သောင်းခွဲ။ ၃-၄ ယောက်စုသွားရင် ပိုတန်တယ်။ တခြားခရီးသည်တွေကိုမေးကြည့်မယ်ဆုိုပေမဲ့ ကိုယ်လိုတကုိုယ်တော်ခရီးသွားသူက သိပ်မရှိလှ။ အားလုံး သူ့ကားနဲ့သူ။ သူ့အုပ်စုနဲ့သု။ အပြင်က ကားငှားရင်လည်း ၄ သောင်းလောက်ပဲကျမှာဆိုတော့ တရက်တာအတွက် ကားတစီးငှားခဲ့ပေါ့။
ကျနော်ကိ လိုက်ပို့်နေတဲ့ ရဲဘော်ကြီးကတော့ တောင်တွေ၊ ဂူတွေကို စိတ်မ၀င်စားဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကျနော် တယောက်တည်း ဂူထဲဝင်ရင်အဆင်မပြေမှာစိုးလိ့ဆုိုပြီး ၁၀ နှစ်အရွယ် သူ့တ ချာတိတ် နစ်ယောက်ကုို လမ်းပြ အဖြစ်ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ နှစ်ယောက်စလုံးကရင်စကားချည်းပြောနေလို့ နယ်စပ်က ကရင်စခန်းတွေကို တောင် ပြန်သတိရမိ။ ကံကောင်းတာကတော့ ကားဆရာက အတော်သဘောကောင်းပါတယ်။
ပထမ ဆုံးသွားတဲ့ ဂူက ဣစာသရလှိုဏ်ဂူ တော်။ အတော်ဝေးတယ်။ နာရီဝက်လောက်မောင်းရပါတယ်။ ပထမ ပိုင်းလမ်းကောင်းပေမဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ ဂူအတွက် သီးခြားဖောက်ထားတဲ့လမ်းကျဉ်း၊ ပြီးတော့ ဂူနားရောက် တော့ လယ်ကွင်းတခုကိုဖြတ်ရ။ မိုးရွာရင် ဗွက်နစ်မဲ့သဘောရှိ။ လယ်ကွင်းအလွန်မှာ ဧရာမတောင်ကြီး တလုံး၊ အဲဒီတောင်ခြေမှာ လျောင်းတော်မူဘုရားဂု။ အဲဒီဘုရားခြေရင်းမှာတော့ ဂုထဲဝင်နိင်တဲ့ ဂူပေါက်ငယ်။
မနက် ၈ နာရီဆုိုတော့ စောသေးလို့လားမသိ။ လူသိပ်မရှိသေး။ ချာတိတ် ၂ ယောက်အားကိုးနဲ့ ဂူထဲဝင်ပြီး အထဲမှာ ဘာတွေရှိလဲ မေးတော့ သူတိုလဲ အခုမှ ပထမ အခေါက်ရောက်ဖူးတာတဲ့။ (တခြားဂူတွေကို ရောက်ဖူးပြီးဖြစ်ပေမဲ့)။ ဂူကအတော်ကျယ်တယ်။ အပေါ်မှာ ကျောက်ဆစ်ရုပ်ဆွဲတွေနဲ့။ အောက်မှာက ရေစီးထားတဲ့ ချောင်းပုံစံ။ ငယ်ငယ်တုန်းက ပထ၀ီမှာသင်ဖူးတဲ့ မြေအောက်ချောင်းဆိုတာ ဒါမျီးဖြစ်မယ်နဲ့ တူပါတယ်။
ဒီဂူရဲ့ထူးခြားချက်က (တခြားဂုတွေ သွားပြီးမှသိရ) လျှပ်စစ်မီးထွန်းပေးထားတာကလွဲရင် ကျန်တာအားလုံး သဘာဝအတိုင်းရှိနေခြင်းပါပဲ။ ပြီးတော့ ဖိနပ်လဲ စီးခွင့်ပေးထားပါတယ်။ (ဥရောပကပြန်လာသူတဦးအဖို့ ဖိနပ်မစီးပဲ စိမ့်စိုစိုမြေပေါ် လမ်းလျောက်ရတာ အဆင်မပြေပါ။ ဖိနပ်မပါပဲ လမ်းလျောက်တာ သဲသောင်ပြင် တနေရာပဲကောင်းပါတယ်)။ ဂူထဲမှာမြင်ရတာတွေအားလုံး တကယ့်အထူးအဆန်းတွေပါပဲ။ ကုိုယ်က ကင်မရာ တလုံးနဲ့လျောက်ရိက်နေပေမဲ့ ဂူထဲတွေ့တဲ့ ခရီးသွား (ကောင်မလေးတွေများ) ကတော့ တွေ့သမျှနေရာမှာ selfei ဆွဲနေလေရဲ့။ သူတို့ပုံတွေမပါအောင် မနည်းရှောင်တိမ်း ညှိနှိုင်းရိုက်ခဲ့ရ။
၁၀ မီနစ်လောက်လမ်းလျောက်ပြီးတော့ ဆက်သွားလို့မရလောက်အောင် ဂူပေါက်က ကျဉ်းသွားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျနော်ရဲ့လမ်းပြ ဆရာ နှစ်ယောက်က အေးဆေးလေး ၀င်သွားလေရဲ့။ ဆယ်နှစ်အရွယ် ကလေးတွေ အတွက် ကုန်းကုန်းကွကွသွားရတာပြသာနာမရှိပေမဲ့ အသက် ၅၀ ကျော်အရွယ် ကျောပိုးအိတ်လည်းလွယ် ထားသူအဖို့တော့ သိပ်မလွယ်ပါဘူး။ ကုန်းကွ ကုန်းကွ တမီနစ်လောက်ကြိုးစားလိုက်တော့ ဟိုဖက်ကို ရောက်သွားပါတယ်။ တကယ်က ပေ ၃၀ လောက်နေရာလေးပဲ ဒီလုို ကုန်းကွ သွားရတာပါ။
နောက်ထပ် ၁၀ မီနစ်လောက် ထပ်လျောက်တော့ အပေါ်ဖက်ကိုတက်ပြီး တောင်ရဲ့အခြားတဖက်က ထွက်ပေါက်ဆီ ရောက်သွားပါတယ်။ တချိ့နေရာမှာ အလူမီနီယံလှေကားဆင်ပေးထားပေမဲ့ နေရာအတော်များများမှာတော့ ၀ါးလှေကားတွေ။ တောထဲက ကရင်အိမ်တွေကိုတောင် သတိရမိ။ အသက် ၂၀ ကျော်တုန်းက ကရင်အိမ်က ၀ါးလှေကားတွေက ပြသာနာမရှိပေမဲ့ အသက် ၅၀ ကျော် ဥရောပပြန်တဦးအဖို့ ၀ါးလှေကားတက်ရတာ သိပ်မလွယ်လှပါဘူး။ လေကောင်းလေသန့်မရလို့လားမသိ။ အမောကလည်း အတော်ဆို့သား။
(မြင်ကွင်းကို ရေးပြရခက်လို့ ဓာတ်ပုံတွေကိုသာ ကြည့်တော်မူပါ။ တကယ့်ကို လှပ အံ့သြဘွယ်ဆိုတာကိုေ တာ့ ကိုယ်တိုင်ရောက်မှ ခံစားနိင်မယ်ထင်ပါတယ်။ သဘာဝဟာ လူသားတွေဖန်တီးထားတာထက် ပိုမို ဆန်းကျယ်လှပါတယ်)
11:38 PM Htet Aung Kyaw No comments
သင်္ကြန်ပိတ်ရက်အစား နားရက်မှာ ဘားအံသွားမယ်ပြောတော့ "ဘားအံမှာ ဘာသွားလုပ်မှာလဲ။ ချောင်းသာဖက်သွားပါလား"- ဆိုပြီး မိတ်ဆွေတချိ့ကပြောပါတယ်။ သင်္ကြန်အကြိုနေ့က ချောင်းသာကို နေ့ချင်းပြန်သွား ဖူးထားပြီးသားဆိုတော့ တခါမှ မရောက်ဖူးသေးတဲ့ ဘားအံကိုပဲရွေးလိုက်ပါတယ်။
ဒီရွေးချယ်မှုရဲ့နောက်မှာ ကရင်မြို့တော်နဲ့ တွဲကပ်နေတဲ့ မာနယ်ပလောတွေ၊ ဒေါနတောင်တန်းတွေ၊ ရဲဘော်ဟောင်းတွေ၊ မူးနော်တွေ၊ မူကနော်တွေ ပါနေမယ်ဆိုတာ အစောပိုင်းက ကိုယ့်ဘာသာတောင် သတိမထားမိဘူး။ (ပုဂံနဲ့ ချောင်းသာခရီးကလွဲရင် ကျန်ခရီးတွေအားလုံးက တောထဲက ဇတ်လမ်းနဲ့တနည်းမဟုတ် တနည်းဆက်စပ်နေတာချည်း) လောလောဆယ် မြင်နေရတဲ့အခင်းအကျင်းကတော့ ချောင်းသာကိုသွားတဲ့လမ်းနဲ့ ဘားအံကိုသွားတဲ့လမ်း ဘာမှ မဆိုင်ဘူးရယ်။
ကံကောင်းထောက်မစွာနဲ့ ဘတ်စ်ကားအစား မဲဆောက်သွားမဲ့ မိတ်ဆွေတယောက်ရဲ့ ကားနဲ့လိုက်ခွင့်ရလို့ လမ်းတွေကို အသေချာမြင်လိုက်ရတာလို့လဲ ဆိုနိင်ပါတယ်။ မြို့ထဲကနေအထွက် အဝေးပြေးလမ်းပေါ်မတက်ခင်လေးမှာ0mile ဆိုင်တန်းတွေက အတော်မိုက်တယ်။ ချောင်းသာဖက်အသွား လှိုင်သာယာဖက်မှာ ဒီလိုမျိးဆိုင် မတွေ့မိပါဘူး။ ထိုင်း လမ်းတွေ၊ ထုိုင်းကဆိုင်တွေနဲ့ အတော်တူပါတယ်။ အာဆီယံအဆင့် မီတယ်ပေါ့။
၇ နာရီလောက်မှာ မနက်စာအဖြစ် မုန့်ဟင်းခါးသုံးဆောင်ပြီးနောက် အဝေးပြေးလမ်းပေါ်ကနေ ၃၉ မိုင်အထိ ခရီးဆက်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ- ခုနက ဆိုင်မှာ အိမ်သာတွေလဲ အာဆီယံအဆင့်မီပါတယ်။ (ဥရောပနေ ပြန်လာသူ တဦးဖိ့ လမ်းခရီးမှာ အိမ်သာမကောင်းတဲ့ပြသာနာကလည်း အတော်ကြီးမားပါတယ်။) တလောက အင်တာဗျးလုပ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ စီးပွားရေးပညာရှင်တဦးကတော့ မြန်မာနိင်ငံမှာ အသေချာသတ်မှတ်ထားတဲ့ တိုင်းတာရေး စနစ်မရှိဘုး။ မန်းလေးကနေ ၁၀၅ မိုင်အထိ မိုင်စနစ်နဲ့သွားပြီး အဲဒါကျော်သွားရင် ကီလိုမီတာဖြစ်သွားတယ်၊ အလေးချိန်မှာလဲ ဒီလိုပဲ။ တချိ့နေရာတွေမှာ ပိသာနဲ့ပြောပြီး တချိ့နေရာတွေမှာ ကီလိုဂရမ်နဲ့ပြောကြတယ်လိ့ ဆိုပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ဒီအဝေးပြေးလမ်းမှာတော့ မိုင်တိုင်ရော၊ ကီလိုတိုင်ရော ၂ ခုစလုံးရှိပါတယ်။ မြန်မာနိင်ငံမှာ အစိုးရ ၂ ရပ်ရှိနေသလို အချိန်အတွယ်နဲ့ အတိုင်းအတာမှာလဲ စနစ် ၂ မျိးရှိပါတယ်လိ့ ကျနော့်မိတ်ဆွေက အသော ၀င်ဖောက်ပါတယ်။ ကားဆရာကတော့ မိုင်တုိုင်နဲ့ ကီလိုတိုင်ကိုကြည့်ပြီး ၃၉ မိုင်ဆို ကီလို ၆၀ လောက်ရှိမှာ ပေါ့။ အဲဒါပြီးရင် ဘုရားကြီးကနေ ဝေါဖက် ဖြတ်ဝင်ရမယ်ဆိုပါတယ်။
အဝေးပြေးလမ်းက အတော်ကောင်းပေမဲ့ နိင်ငံတကာက အဝေးပြေးလမ်းတွေလို ဘေးမှာ ခြံစည်းရုံး အလုံ ပိတ်ထားတာမျိးမရှိ။ မိုင် ၁၀၀ လောက်အရှိန်နဲ့မောင်းနေတဲ့ ဟိုက်ဝေးလမ်းဘေးက မြေနီလမ်းပေါ်မှာ နွား လှည်းလဲရှိတယ်။ မော်တော်ဆိုင်ကယ်လဲရှိတယ်၊ လမ်းဖြတ်ကူးတဲ့ လူတွေ၊ ယဉ်တွေလဲ ရှိတယ်။ ဟိုက်ဝေး စနစ်က တမျိးကြီးရယ်။ .."ဒါနေ့ဖက်မို့တော်သေးတယ်။ ဟိုတခါတန်းကဆို ညဖက်မှောင်နေတဲ့အထဲ အဲဒီလမ်း လယ်မှာ ကားတာယာကြီးချထားတာ။ ကီလို ၁၀၀ နှုန်းလောက်မောင်းနေတာဆိုတော့ ဘယ်လိုမှ ရှောင်ချိန် မရဘူး။ တည့်တည့်ကြီး တိုက်ပစ်လိုက်ရတယ်။ ရှောင်ရင် မှောက်မှာ."..ဆိုပြီး ကားဆရာကပြောပါတယ်။
ဒါကြောင့် ညဖက်မှာ ကားတွေ မကြာခဏ တိမ်းမှောက်တာ၊ တိုက်မိတာတွေဖြစ်နေတာပေါ့။ အဲလို ကား မှောက်ရင် ၀င်လုတဲ့ လူတွေလဲရှိတယ်လိ့ ကားဆရာကဆိုပါတယ်။ ခြံစည်းရုံးမရှိတဲ့ ဟိုက်ဝေးလမ်းရဲ့ ထူးခြား ချက်များပေါ့။ ဒီကားဆရာပြောမှ ချောင်းသာသွားတုန်းကပြောတဲ့ ကားဆရာစကားကို သွားသတိရမိတယ်။ အဲဒီတုန်းက ညဖက်ကြီးမောင်းတာ။ လမ်းကအတော်ဆိုးတာပဲ။ ကားတွေ ဒီလောက်သွားနေတာ ဘာကြောင့် မပြင်ကြတာလဲ ဆိုပြီးစာရေးသူက ငြီးမိတော့... "အဝေးပြေးလို လမ်းတွေ သိပ်ကောင်းနေရင် ကားသမား တွေအိမ်ငိုက်ပြီး ယဉ်တိုက်မှုဖြစ်မှာစိုးလို့ ဧရာဝတီတိုင်းအစိုးရက နဂုိုလမ်းအတိုင်း ထိမ်းထားပေးတာပါ'' တဲ့။ အတော်အကောင်းမြင်တတ်တဲ့ ကားဆရာပါပဲ။
ကဲ- ဧရာလမ်းနဲ့ ရာမညလမ်းကို နှိုင်းယှဉ်ရင်းနဲ့ စစ်တောင်းတံတားတောင် ကျော်တော့မယ်။ တံတားအ၀င်က စစ်ဆေးရေးဂိတ်ကိုမြင်မှ လမ်းတလျောက်ပေးခဲ့ရတဲ့ တိုးလ် ဂိတ်ကြေးတွေ၊ မြိ့ဝင်ကြေးတွေကို သတိထားမိပါတယ်။ ခုနက ချောင်းသာဖက်သွားတဲ့လမ်းမှာ လမ်းကြေး၊ တိုးလ်ဂိတ်ကြေးမှ မပေးရပဲ။ ဒီဖက်မှာတော့ လမ်းတွေကို BOT စနစ်နဲ့လုပ်ထားတာဆိုတော့ အဲဒီအတွက် အများကြီးပေးရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လမ်းကကောင်းတော့ ဒီလိုပေးရတာ တန်ပါတယ်။ မတန်တာကတော့ ဘာမှန်းမသိပဲ ကောက်နေတဲ့ မြိ့ဝင် ကြေးတွေပါပဲ။
အစိုးရသစ်လက်ထက်မှာ ဒါတွေ မကောက်တော့ဘူးဆိုပေမဲ့ ဒေသခံတွေ အလုပ်လက်မဲ့ (တခြားအလုပ် ကလဲ ဒီလိုလွယ်ကူပြီး ၀င်ငွေမကောင်းနိင်) ဖြစ်မှာစိုးလို ဆက်လက်ခွင့်ပြူထားတယ်လို့ပဲ အကောင်းမြင် ပေး လိုက်ပါတယ်။ စစ်တောင်းတံတားကုးပြိး ကျိက်ထုံမြိ့ထဲအ၀င် ကျိူက်ထီးရိုးလမ်းခွဲအလွန်မှာ ထူးထူးခြားခြား ဧရာမအလှူပွဲကြီးတခုကိုတွေ့ရပါတယ်။ ဆင် ၁၀ ကောင်၊ မြင်းအကောင် ၂၀ ကျော်၊ နွားလှည်း ၃၀ ခန့်နဲ့ မော်တော်ယဉ် ၁၀၀ ခန့်ပါတဲ့ အလှူပွဲကြီးဆုိုတော့ ကျိက်ထုံတမြိုလုံး လမ်းတွေပိတ်ကုန်ရော။ ကုိုယ်တွေက အဆင်းကားမို့နဲနဲတော်သေးတယ်။ မော်လမြိင်၊ ဘားအံ၊ ထားဝယ်ဖက်ကနေ တက်လာတဲ့ ကားတွေ ရာနဲ့ချီပြီး ပိတ်မိခဲ့ပေါ့။
ရန်ကုန်ကနေ မော်လမြိင်-ထားဝယ်ဖက်လမ်းတွေကိုသွားဖူးပြီးသားမို့ သထုံကနေ ဘားအံလမ်းခွဲ ရောက်တဲ့ အထိက စာရေးသူအတွက် အသစ်အဆန်းမဟုတ်။ ဟော...အခု သထုံ-ဘားအံ လမ်းခွဲရောက်ပါပြီ။ ဒီဖက်မှာလဲ BOT စနစ်ကဆက်သွားနေတော့ လမ်းတွေက ကောင်းနေဆဲ။ သထုံက ထွက်တာနဲ့ ချောင်းတခု၊ စစ်ဆေးရေးဂိတ်တခုကိုတွေ့ပါတယ်။ စာကိုအသေချာဖတ်ကြည့်တော့ ဒုံသမနိ ချောင်းတဲ့။ တော်လှန်ကဗျာ ဆရာတဦးဖြစ်တဲ့ ကိုငြိမ်းဝေရဲ့ ကဗျာထဲမှာ ဒီချောင်းအမည်ကို ရင်းနှီးဖူးခဲ့ပေါ့။
အရင်ကဆို ဒီတံတားက စစ်ဆေးရေးဂိတ် မကြာခန အတိုက်ခံရတာပေါ့။ အားလုံးဆင်းပြီး မှတ်ပုံတင်ပြ အစစ်ခံရတဲ့အခြေအနေကနေလွတ်တာတောင် မကြာသေးဘူး။ ငြိမ်းချမ်းရေးရပြီးမှ ဒီနေရာတွေ အေးသွားတာ ဆိုပြီး ကားဆရာကပြောပါတယ်။ အင်း... မွန်ပြည်နယ်-နဲ့ ကရင်ပြည်နယ် နယ်စပ်ချောင်း ဒုံသာမနိမှာ လူဆင်းပြီး မှတ်ပုံတင်ပြစရာမလိုတော့ပေမဲ့ မွန်-တနသ်ာရီနယ်စပ်က မလွဲတောင်ဂိတ်မှာ အခုချိန်အထိ လူဆင်း မှတ်ပုံတင်စစ်တဲ့စနစ် ဘာကြောင့် ဆက်ကျင့်သုံးနေတာလဲဆိုတာ စဉ်းစားလို့ကိုမရဘူး။
ဒုံသာမနိချောင်းကိုကျော်ပြီဆိုတော့ ကရင်ပြည်နယ်ထဲရောက်ပြီ။ ဟိုရှေ့နားမှာ မြိုင်ကလေး ဘိလပ်မြေ စက်ရုံရှိပါတယ်။ ဒီအတွက် ကုန်ကြမ်းဖြစ်တဲ့ ထုံးကျောက်တောင်တွေက ဟိုနား ဒီနား ထိုးထိုးထောင်ထောင်။ မြင်ကွင်းက မွန်-တနသာင်္ရီဖက်လို တောင်စဉ်တန်းတွေမဟုတ်ပဲ လုံးချင်း ကျောက်တောင်တွေ ဟိုတလုံး၊ ဒီတလုံး။ မွန်ပြည်နယ် ကျိက်မရောဖက် ထုံးကျောက်တောင်တွေနဲ့ ခပ်ဆင်ဆင်တူပါတယ်။ ဘားအံအ၀င်နားက ထုံးကျောက်တောင်တလုံးကတော့ ဘိလပ်မြေအတွက် ဘ၀ပြောင်းပေးလိုက်ရလိ့ မြေခခါနီးနေတာကို တွေ့ ရပါတယ်။
ဟိုး..မှာ ဇွဲကပင်တောင်ကိုမြင်နေရပြီ။ ရှေ့နားက သစ်ပင်တန်းကိုကျော်တော့ သံလွင်မြစ်ကူး သံလွင်တံတားကြီး ရုတ်တရက်တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ ဒီတံတားကျ (မွန်ပြည်နယ်က ဘီလုးချောင်းတံတားလို) ဘာကြောင့် ဗိုလ်ချပ်အောင်ဆန်းတံတားလို့အမည်မပေးတာလဲဆိုပြီး ကားဆရာကုိုမေးတော့ ဒီတတားက ဒီအစိုးရမတိုင်ခင်ကတည်းက ရှိနေတာကြပြီလိ့ ဆိုပါတယ်။
ဒီလို ဟိုငေး ဒီတွေးနဲ့ ၁၁ နာရီလောက်မှာ ဘားအံမြိ့ထဲ ရောက်လာပါတယ်။ ရန်ကုန်-ဘားအံ ကီလို ၃၀၀ နီးပါး (291.6 km) ကို ၄ ခွဲ၊ ၅ နာရီလောက်ပဲမောင်းရပါတယ်။ လမ်းတွေသိပ်ကောင်းနေလို့လား။ တောင်မရှိလို့လား။ တောင် မရှိတာကတော့ စာရေးသူအတွက် အထူးအဆန်းပါပဲ။ ဘာကြောင့်လဲဆို နယ်စပ်တကျောမှာ ၁၀ နှစ်လောက် သွားခဲ့ဖူးတဲ့ ကရင်ပြည်နယ်မှာ တောင်မတက်ရတဲ့နေရာ မရှိသလောက်ပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ ဒီဖက်မှာတော့ ဘားအံရောက်တဲ့အထိ တောင်တက်စရာမလိုဘူး။ ဇွဲကပင် အပါဝင် တောင်တွေက သူ့ဘာသာ လုံးချင်းစီ ရှိနေပြီး ကားလမ်းတွေက တောင်အောက်က မြေပြန့်မှာချည်းဖြစ်နေပါတယ်။